Izingane nezingane - iSearch
Kwaba lula kubazali (abalindele) ukuthola uhlu lwemishini eyisisekelo evela kumbelethisi. Uma zonke izinyathelo zenziwe futhi ibhalansi enesisindo libolekwe ekhemisi, babeqiniseka ukuthi bazokwazi ukunikeza lo mshazi ngokusho kwezidingo zabo. Ngesikhathi se-Intanethi, izinto eziningi ziye zaba lula, kodwa ngokukhukhula kolwazi nokunganaki kukhishwa. Ukwesaba okukhulu okuvame ukuphazamisa abazali abasha kuyi-"Sudden Infant Death Syndrome" (Sudden Infant Death Syndrome). Nakuba imikhankaso yokuvimbela yokunciphisa ingozi iye yanciphisa kakhulu inani labantu abafayo eJalimane kusukela ku-602 ngonyaka 1998 kuya ku-152 ku-2013, ukwesaba sekusele. Kungenzeka futhi ukuthi izimbangela zisaqondwa ngokugcwele. Ukungaqiniseki okuvela kubazali kuvumela ukuthi imboni iqhubeke nokuthuthukisa imikhiqizo emisha. Ngakho ngobuchwepheshe imikhiqizo ezintsha isukela isiyatholakala kusukela ingane ngabaqaphi nge inzwa amacansi lokuqapha zokuphefumula ngoba lokushisa eziqondisayo Baby-sleeping bag ukuze ingane amasokisi nge izinzwa ukuqapha kwenhliziyo kanye nowe-oxygen okuqukethwe.
I-boom efanayo njengamanje iqhutshwa imikhiqizo yokuthuthukisa nokufunda kanye nezinhlinzeko zezingane ezincane nezikole. Nalapha futhi, i-drive for umkhakha nabahlinzeki iyona ukungaqiniseki okwandisa kubazali. Ekhathalela amathuba liyancipha, ukwehluleka esikoleni noma ezinye umsebenzi esikoleni izizathu isihluku, ngakho-ke ngokuvamile etshaliwe masinya ekukhuthazeni - futhi namuhla wehlukile: ngaphezu multi-functional izikhungo umsebenzi izingane namakhompyutha ukufunda ngoba izingane nazo amakilasi isiZulu yangasese kakade eyenzelwe izingane ezineminyaka engu unyaka owodwa okusezingeni eliphezulu esikoleni. Ngaphezu kwalokho, Izithako zokudla eklanyelwe ukukhuthaza okuhlushwa ukusebenza isayensi kits ukhuthaze nesifiso sokufuna zemvelo ukuhlola.
Okokugcina, ukubhaliswa, kuqala isigaba sokuphila esisha, okuvame ukusho ukuhlelwa kabusha kwempilo yomndeni, kodwa futhi kuhambisane nokuqedwa okuphelele kwengane kanye nokuguqulwa kwezingane. Akugcini nje ukuthi i-satchel ifanelwe ukuphakama nesisindo somntwana, okumele sibe nesimiso esinqunyiwe futhi esiqinile, esidingekayo manje. Kodwa futhi ifenisha kufaka phakathi ukuphakama nokuguqula idesksi eguquguqukayo kanye nesitulo esifanayo se-desk ergonomic manje sekuvame ukuphakama ohlwini lokuthenga.
Ububanzi bemikhiqizo buyinkimbinkimbi ngempela kunokuba kube lula ukukhetha umkhiqizo ngamunye okufanele ubuntu bomntwana nokubambisana, izidingo zabazali zikhula nazo zonke izindlela ezintsha ezintsha zobuchwepheshe kanye nesifundo sokuthuthukiswa esanda kukhishwa. Ngoba ngisho nentengo ephezulu ingaphandle kwesiqinisekiso semfanelo yomkhiqizo. Ngesizathu esihle sokuthi ama-laboratories ahlolwe ngokuzimela abhekana nezinkinga zokuqina, ukuphepha, ubungane bemvelo nokusebenza. Kumqondisi wethu, uzothola amanothi emiphumela yokuhlola futhi ukhethe ukukhetha okufanisayo.